iRANGER - Aquagem Pool mgbapụta Frequency Inverter
Kasị Ike nhicha robot
* High ọgwụgwụ ime akara
* Ft, mgbidi, waterline ihicha
* Kasị Ukwuu mmiri ikike: 18.m³ / h
* kasị akpali akpali ọsọ: 15M / min
* 3D Gyroscope igodo
* Cycle oge: 0,5 / 1 / 1.5 / 2h
* Weekly ngụ oge; High-ọgwụgwụ akara igbe na ngosi
iRANGER bụ a elu-ọgwụgwụ robotic ọdọ mmiri Cleaner na a kasị dị ike ihicha ikike.
N'ịbụ 3 ike Motors na a na naa mmiri na-arụ ọrụ usoro, iRANGER e engineered na a mmiri ike nke 18m³ / h, na a na-akpali akpali na-agba na 15 mita / min, ọ bụ doro anya na a kasị dị ike robotic Cleaner.
3D Gyroscope igodo
Patented nhicha Nsoro Design
Onwem na a smart ụzọ na onwe kwado usoro ihe omume, iRANGER nwere ike ịchọpụta nwere tangle mere site ndiiche na-eme ka onwe ukpụhọde mgbe navigating site ọdọ mmiri n'elu. Navigation software ana achi achi ọdọ mmiri ala-n'ụzọ zuru ezu-kpuchie.
Zuru okè Otu ebe Promotional na Pool Walls
iRANGER si 4 elu àgwà PVA brushes ana achi achi a otu ebe rịa na Promotional na ọdọ mmiri mgbidi, a flexibiligy nke na-akpụ akpụ n'elu ihe mgbochi. PVA brushes pụrụ iche ihe dịruru ugboro abụọ ka ogologo dị ka ot roba brushes na-eguzogide mmanụ, bacteria, algae na ndị ọzọ na contaminants.
Ka iRanger eme ya ọrụ na tupu kenyere ụzọ ma ọ bụ na-eduzi ya na ebe ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ ihicha dị mkpa na-eji ihe nwere ọgụgụ isi ime akara abịa tinyere na robot.
A 7-ụbọchị programmable ngụ oge na-azọpụta gị hassle na nsogbu a smart ihicha.